Zvekutengesa Zvemukati Dhizaini
Zvekutengesa Zvemukati Dhizaini Mirira pfungwa uye chizere chechisarudzo nenzira inoshamisira kuburikidza nekugadzirwa kwechitoro, zvakanyanya pamusika weCanada uye Yorkdale wateja. Uchishandisa ruzivo rwepfuura pop uye nzvimbo dzepasi rese kuti dzivandudze uye kufunga zvekare chiitiko chose. Gadzira iyo yekupedzisira-inoshanda chitoro, icho chingashande zvakanaka kune yakanyanya traffic, nzvimbo yakaoma.
Zvemukati Dhizaini Iyo yemazuva ano North American grill, jongwe rekugara uye mudenga re terata iri muMidtown Toronto vachipemberera yakanatswa yekirasi menyu uye indulgent siginecha zvinwiwa. Arthur's Restaurant ine nzvimbo nhatu dzakasiyana dzekunakidzwa (nzvimbo yekudyira, bara, uye padenga padenga) inonzwa zvese zviri padyo uye dzakakura panguva imwe chete. Iyo denga yakasarudzika mukugadzirwa kwayo kwamapuranga akavezwa nehuni, uye yakavakwa kuti iwedzere chimiro che octagonal yekamuri, uye kutevedzera kutaridzika kweakachembera akachekwa akarembera pamusoro.
Kumhoresa Imba Yevana
Kumhoresa Imba Yevana Iyi yekuvakira dhizaini ndeyekuti vana vadzidze uye kutamba, inova imba yeKunakidzwa zvachose kubva kuna baba vepamusoro. Mugadziri akasanganisira zvinhu zvine hutano uye chimiro chekuchengetedza kuti aite chinoshamisa uye chinonakidza nzvimbo. Vakaedza kugadzira imba yekutamba yevana yakanaka uye inodziya, uye vakaedza kusimbisa hukama hwevabereki nemwana. Mutengi akaudza mugadziri kuti azadzise zvinangwa zvitatu, izvo zvaive: (1) zvisikwa uye zvekuchengetedza zvinhu, (2) kufadza vana nemubereki kufara uye (3) nzvimbo yakaringana yekuchengetedza. Mugadziri akawana nzira iri nyore uye yakajeka yekuzadzisa chinangwa, chiri kumusha, iko kutanga kwenzvimbo yevana.
Imba Yemukati Ndeipi nzvimbo yeimba? Dhizaina anotenda dhizaini yacho kubva pane zvinodiwa nemuridzi, inosvikirwa nemweya kune nzvimbo. Naizvozvo, mugadziri akafamba nechinangwa chavo chenzvimbo nevaviri vakaroora. Vaviri varidzi muridzi anoda zvigadzirwa uye dhizaini solution pamwe netsika dzechiJapan. Kwekumiririra ndangariro pakati pendangariro dzavo, vakasarudza kushandisa matanda akasiyana siyana ehuni kugadzira imba yemweya. Nekuda kweizvozvo, vakagadzira zvibvumirano zvitatu zvekubvumirana zveimba ino yakanaka, yaive (1) Quiescent mamiriro ekunze, (2) Nzvimbo dzinoyevedza uye dzakanaka dzeveruzhinji, uye (3) nzvimbo dzakagadzikana uye dzisingaoneki dzakavanzika.
Imba Yekurangarira Imba ino inopa mifananidzo yemumba nematanda uye neyakagadzikwa zvidhinha. Mwenje unoenda uchibva munzvimbo dzezvidhina zvichena zvakatenderedza imba, uchigadzira mamiriro akakosha kumutengi. Mugadziri anoshandisa nzira dzinoverengeka kugadzirisa zvisingakwanisi muchivakwa ichi kune emweya-mafirita uye nzvimbo dzekuchengetedza. Zvakare, sanganisa zvishandiso neyekuyeuka yevatengi uye wopa inodziya uye inoyevedza inoyevedza kuburikidza nechimiro, ichibatanidza chimiro chakasarudzika cheimba ino.
Svondo 5 Chikumi 2022
Imba Yemukati Iyi imba inoratidzira yega yakasarudzika mararamiro evakadzi, inova grafiki dhizaini uye imba yemushambadzi. Nyanzvi yekugadzira inopa zvigadzirwa zvakasikwa kuenzanisira zvido zvemuenzi uye nekuchengetedza nzvimbo dzisina chinhu kuzadza nhengo yemhuri zvinhu. Iyo kicheni ndiyo yepakati peimba, yakakosha yakagadzirirwa kutaridzika kwevatorwa uye ita chokwadi chekuti vabereki vanogona kuona chero kupi. Imba yakarongedzwa nechena egirini isina musiti pasi, Italy mineral pendi, girazi rinoonekera, uye chena poda kubatirira kuratidza zvakanakisa zvinhu zvezvinhu.
Chishanu 3 Chikumi 2022
Phuket VIP Mercury Hofisi Chipiri 28 Chikumi
Feiliyundi Nzvimbo Yekutengesa Muvhuro 27 Chikumi
Qwerty Elemental Zvikwama Ruoko Svondo 26 Chikumi
Zvekutengesa Zvemukati Dhizaini Zvemukati Dhizaini Kumhoresa Imba Yevana Imba Yemukati Imba Yekurangarira Imba Yemukati